Mametraha Serivisy Thumbnail Pikantsary | Martech Zone
Asabotsy, Aogositra 6, 2011 Alahady Oktobra 30, 2011 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity aho dia niasa tamina tranonkala hafa (mbola) DK New Media. Mahafinaritra tokoa ity iray ity - amin'ny fakana sary an-tsary ny sary nataon'i Paul D'Andrea ho an'ny orinasanay ary manome tranokala HTML5 tsara izay mifanaraka amin'ny cross-browser. Mbola manana asa hatao amin'ny hafainganam-pandeha isika, antso ho amin'ny hetsika sy ny pejy fandraisana - fa efa akaiky eo io.
Ny iray amin'ireo zavatra tianay hatao dia ny fampisehoana ireo mpanjifanay amin'ilay tranonkala. Koa satria mitohy miakatra io isa io, mety mampanaintaina tokoa ny fampiharana endrika vaovao sy ny fiverenana maka sary famantarana na pikantsary. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanapa-kevitra ny hampihatra serivisy pikantsary fotsiny aho. Mampalahelo fa tsy dia mora araka ny noeritreretinao… lafo ny maro ary mampihomehy fotsiny ny kaody ampiharina indraindray.
Sendra serivisy vaovao aho, url2png, io tolakandro io ary nampiharina tanteraka tao anatin'ny minitra vitsy! Ny fanamboarana ny lohahevitra WordPress dia tena ela kokoa noho ny fanatanterahana ny serivisy pikantsary. Ny tena mahavariana kokoa aza dia ny fanarahan'ny olona any ny fangatahako ary rehefa niverina tany amin'ilay tranonkala aho dia nanokatra resaka tamiko izy ireo hahitana raha manana olana aho. Oay!
Ny serivisy dia tsy mitaky fiampangana toa ny sasany. Raha mangataka ianao… hosakanany mandritra ny 30 andro ny sary ary tsy hanome vola anao izy ireo noho ireo fangatahana cache. Midika izany fa afaka mihazakazaka amin'ilay tranonkala miaraka amin'ny serivisy aho $ 10 isam-bolana (hatramin'ny URls tokana 1,000). Mahatalanjona!
Ny fangatahana no tsotra indrindra hitako… fomba tsotra fotsiny hananganana ny fangatahana sary miaraka amin'ireo miovaova rehetra ao anatin'ny URl. Nanome koa izy ireo santionany kaody ho an'ny PHP, Python, Ruby ary Bash… Izay tsipika kaody vitsivitsy fotsiny. Raha tsy ataonao tsara ny fangatahana dia alefan'izy ireo ny olana ary omeny anao ny sary izay misy mari-drano eo aminy. Tena voadinika tsara!
Ny valiny farany dia tsara tarehy. Manana pejin'ny mpanjifa izahay ahafahan'ny olona manao totozy isaky ny tranokala ary mahita ny asa efa nataonay ho an'ny mpanjifa:
Raha tsindrio ny mpitsidika ny rohy bebe kokoa dia hitondra azy ireo amin'ny pejy iray izy ireo hahitan'izy ireo ny kinova lehibe kokoa amin'ny pikantsary:
Ny ampahany tsara amin'ny fampiasana ny serivisy dia satria, rehefa mampiditra mpanjifa vaovao isika dia tsy mila mivoaka haka fakantsary ho azy ireo rehefa ampidiriko ao amin'ny portfolio-n'ny tranokala. Ary io tahiry io no mety ho antony tsara indrindra amin'ny rehetra!